तराईमा बाढी आउँदा दुःखी फिल्मकर्मी, सरकारसँग गरे यस्तो अपिल « Ramailo छ
तराईमा बाढी आउँदा दुःखी फिल्मकर्मी, सरकारसँग गरे यस्तो अपिल
समय : 8:24 pm
देशको पुर्वी क्षेत्रमा गएको बाढीले जनधनमा पुर्याएको क्षतिप्रति फिल्मकर्मीले दुःख व्यक्त गर्दै सरकारलाई तत्काल बाढी प्रभावितको उद्धार तथा थप क्षति हुन नदिन आग्रह गरेका छन् । पुर्वी क्षेत्रमा गएको बाढी बारे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा शनिबार नेपाली फिल्मकर्मी यस्तो लेखेका छन् ।
तस्बिर : नरेन्द्र श्रेष्ठ
नायिका तथा निर्मात्री, रेखा थापा : बाढि पहिरोको कारण डुबान क्षेत्रमा पर्नु भएका सबैलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न र तत्काल उद्वार कार्यलाई तिब्रता दिन सरकार सँग आग्रह गर्दछु ।
निर्माता तथा कलाकार, दिपकराज गिरी : यो दल त्यो दल भनेर खुब लड्यौं । फेरी लड्दै गरौंला । अहिले चाहिं एकजुट भएर यो दैवी प्रकोप विरुद्ध लडौं ।
निर्देशक, आकाश अधिकारी : पहाड चिरिएको छ । तराई डुबेको छ समग्रमा सारा नेपाल रोईरहेको छ यति बेला । यस्तो घडिमा नरुने को नेपाली होला ? स्रोत र साधनको सक्दो प्रयोग गरि यथा शिघ्र जनता बचाउ राज्य यदि जनताको माया छ भने ।
निर्देशक, दिपाश्री निरौला : पुर्व डुबेको देख्दा आफै डुबेको महशुस भैरहेको छ । आउनुस् यो पुर्वको पिडालाई पूरै देशको पिडा सम्झौ…!!!
निर्देशक, निश्चल बस्नेत : सकेको जति सहयोग एक अर्कालाई गरौं ।
कलाकार केदार घिमिरे, माग्ने बुढा : अहिलेसम्म सरकार बाँधको ढोका खोल्न अनुरोध गरेर बसेको छ । यसलाई यत्ति शेयर गर्नुस कि, अनुरोध होइन हप्काएर खोल्न लगाउने अवस्थामा सरकार पुगोस् ।
निर्माता तथा वितरक, प्रदीप कुमार उदय : सरकार तत्काल डुबान क्षेत्रमा उद्वार टोली खटाऊ । जनतालाई सुरक्षित स्थानमा पुराऊ । आज बर्षा, बाढि, पहिरोको कारण जनता समस्यामा छन ध्यान पुराउ सरकार । आज देशको २१ स्थानमा चलचित्र भवनहरू वर्षा, बाढी, पहिरोको कारण बन्द छन् ।
निर्माता तथा कलाकार : पुर्वका तथा तराईका चलचित्रकर्मीहरु यो विपत्ती बारे अभियान सुरु गर्नुस् । फेसबुकमा लेख्नुस्, हामी साथमा छौ । केहि दाताहरु मेरो सम्पर्कमा आउनु भएको छ । मौन नबसौं ।
निर्माता, राजेश घतानी : मेरो तराइ रोएको छ!!!
१.फोनको प्रयोग फारु गरौ।
२.सकेसम्म बेट्रीवाला रेडियो साथमा राखौ।प्रसासनिक प्रयास थाहा हुन्छ।
३.सफा पानी र खानेकुराको जोहो गरौ।
४.राती पालोगरी आराम गरौ,सचेत रहौ।
५.बृद्ध,अशक्त र बालबच्चालाइ प्रार्था्मिक्ता दिउ।
६.युवा साथीहरु परिस्थिती अनुकुल भए लगत्तै उद्दारमा लागौ।
…..प्रकृति शान्त बनिदेउ!!